တရုတ် 1ml, 2ml Cryogenic Vial ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူများ | J.able
1ml၊ 2ml Cryogenic Vial
မော်ဒယ်နံပါတ်: CV-1WX / CV-2WX
1ml ပမာဏ၊ OEM ဘားကုဒ်
2ml ပမာဏ၊ OEM ဘားကုဒ်
DNase နှင့် RNase အခမဲ့၊ မြင့်မားသောတံဆိပ်ခတ်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်
မော်ဒယ်နံပါတ်- CV-1WX၊ CV-2WX
ထုတ်ကုန်အမည်- Cyro Vials
Tube ပစ္စည်း- Polypropylene
စွမ်းရည်- 1ml၊ 2ML
အရောင်- အနီ/အဝါ/အပြာ/အစိမ်းရောင် ဦးထုပ်
DNAse/RNAse အခမဲ့၊ ဘွဲ့ရ
အပူချိန်ခံနိုင်ရည်: -196 ℃ - 121 ℃
ထပ်ခါတလဲလဲ အေးခဲပြီး ရောမွှေပါ။
1. ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့် polypropylene ပစ္စည်း၊ အေးခဲပြီး ထပ်ခါထပ်ခါ နွေးနိုင်သည်။
2. 1ml၊ 1.5ml၊ 2ml (အပြင်ဘက်နှင့် အတွင်းပိုင်း) သတ်မှတ်ချက်များ အမျိုးမျိုး ရနိုင်ပါသည်။
3. 1ml နှင့် 1.5ml သည် 100 boxes အတွက် သင့်လျော်ပြီး 2ml သည် 81 boxes အတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ ဘူးအဖုံးကို အနီ၊ အဝါ၊ အပြာ၊ အစိမ်း၊ အဖြူ၊ ခရမ်းရောင်နှင့် လိမ္မော်ရောင် ခုနစ်ရောင်ဖြင့် ရွေးချယ်နိုင်သည်။
4. အီလက်ထရွန်ရောင်ခြည်ကို ပိုးသတ်ခြင်း၊ DNase မရှိ၊ RNase၊ endotoxin မရှိ၊ exogenous DNA ပြွန်ဘားကုဒ်သည် ထူးခြားသည်။
-196 ℃ ~ 121 ℃ အထိခံနိုင်ရည်ရှိပြီး နိုက်ထရိုဂျင်အရည်ဓာတ်ငွေ့အဆင့်အခြေအနေများအောက်တွင် လုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ထာဝရလိုက်စားမှုများမှာ "စျေးကွက်ကို အလေးထားပါ၊ ဓလေ့ထုံးစံကို အလေးထားပါ၊ သိပ္ပံပညာကို အလေးထားပါ" နှင့် "အရည်အသွေးသည် အခြေခံဖြစ်ပြီး၊ ပထမဆုံး ယုံကြည်ချက်နှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းသည် အဆင့်မြင့်" သီအိုရီဖြစ်သော China 4ml External Thread Cryo Vials ၏ သဘောထားနှင့် Silicone Seal with Manufacturer ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်ကျေနပ်မှုရှိသော ဖောက်သည်များ၏ တက်ကြွပြီး ရေရှည်ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ တဖြည်းဖြည်း ကြီးထွားလာသည့်အတွက် ဝမ်းမြောက်မိပါသည်။
China Cryo Vials ၏ ထုတ်လုပ်သူ Cryovial၊ နယ်ပယ်တွင် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများက ကျွန်ုပ်တို့အား ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာဈေးကွက်တွင် ဖောက်သည်များနှင့် မိတ်ဖက်များနှင့် ခိုင်မာသောဆက်ဆံရေးကို ပုံဖော်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ဖြေရှင်းချက်များအား ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံပေါင်း 15 နိုင်ငံကျော်သို့ တင်ပို့ရောင်းချခဲ့ပြီး သုံးစွဲသူများက တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
အဆင့်မြင့်နည်းပညာများနှင့် အဆောက်အဦများ၊ တင်းကျပ်သော အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်း၊ သာလွန်သောဝန်ဆောင်မှုများနှင့် သုံးစွဲသူများနှင့်အတူ အနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် တရုတ်နိုင်ငံထုတ် Manufacturer of China 2ml 5ml 10 Ml Transparent Cryogenic Vials Well Seal Plastic Test Cyro ၏ဖောက်သည်များအတွက် အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးကို ပေးဆောင်နေပါသည်။ Tubes Self Standing Cryotube Clear Freezing Cryovial Tube, Our company is dedicated to provide customers with high and stable quality products at competitive price , making every customersatisfaction with our products and services.
China Freezing Tube၊ 1.5ml Cryotube ၏ ထုတ်လုပ်သူ၊ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြေရှင်းချက်အားလုံးကို အရည်အသွေးမြင့်မားစေရန်အတွက် အဆင့်မြင့်စက်ပစ္စည်းများနှင့် တင်းကျပ်သော QC လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ဖြေရှင်းနည်းများကို သင်စိတ်ဝင်စားပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ရန် တုံ့ဆိုင်းမနေသင့်ပါ။ မင်းရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ ငါတို့ အစွမ်းကုန်လုပ်မယ်။
ယခင်- 1.4ml၊ 5ml Cryo Vial
နောက်တစ်ခု: 3ml၊ 5ml၊ 6ml၊ 10ml နမူနာပြွန်
ဗိုင်းရပ်စ်သည် နျူကလိစ်အက်ဆစ် မော်လီကျူးတစ်ခုနှင့် ပရိုတင်း သို့မဟုတ် ပရိုတင်းတစ်မျိုးသာ ပါဝင်ပြီး အရွယ်အစားသေးငယ်ပြီး ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ ရိုးရှင်းပါသည်။ ဆဲလ်ဖွဲ့စည်းပုံမရှိသောကြောင့်၊ ဗိုင်းရပ်စ်ကိုယ်တိုင်က ပုံတူပွားခြင်းမပြုနိုင်သော်လည်း ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ပြန်ပွားရန်အတွက် နောက်ဆုံးပုံတူစနစ်၏အကူအညီဖြင့် ဆဲလ်အတွင်း nucleic acid မျိုးဗီဇကို လက်ခံထားသည်။ ဗိုင်းရပ်စ်နမူနာများကို စုဆောင်းပြီးနောက်၊ ဗိုင်းရပ်စ်နမူနာများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ထိန်းသိမ်းရန်၊ နမူနာများတွင် ဗိုင်းရပ်စ်များ၏ ရှင်သန်မှုအချိန်ကို တာရှည်စေရန် သို့မဟုတ် lysate ဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ်များကို အသက်မသွင်းဘဲ၊ ဗိုင်းရပ်စ်၏ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းအချို့ (ဥပမာ- nucleic acid နှင့် antigen protein) တို့ကိုသာ ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်တွင် သယ်ဆောင်သည်။
တခါသုံးဗိုင်းရပ်စ်နမူနာပြွန်တွင် နမူနာပြွန်၊ ဦးထုပ်၊ VTM ထိန်းသိမ်းမှုဖြေရှင်းချက် နှင့်/သို့မဟုတ် နမူနာပြွန်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
3ml၊ 5ml၊ 6ml၊ 10ml နမူနာပြွန်
1.4ml၊ 5ml Cryo Vial
Nasopharyngeal Swab ကလေးအထူးကု, Falcon Centrifuge Tubes 15ml, Viral Transport Media Kit, Sterile Microcentrifuge Tubes များ, Self Standing Centrifuge Tubes များ, Buccal Swab စုဆောင်းမှုအစုံ,